နှဈနိုငျငံစီးပှားရေးမွှငျ့တငျရနျ ပွငျသဈစီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမညျ - Myanmar Builders Guide
ပွငျသဈစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ၂၀ ဦးပါဝငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့တှငျ စှမျးအငျလုပျငနျး၊ ရနှေငျ့ အမှိုကျသနျ့စငျခွငျးလုပျငနျး၊ ရထားလမျး ပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး၊ အခွခေံအဆောကျအအုံလုပျငနျး၊ ဘဏျနှငျ့ ခြေးငှဝေနျဆောငျမှုလုပျငနျး၊ ဓါတျငှေ့ လုပျငနျး၊ စားသောကျကုနျလုပျငနျး၊ ရကွေောငျးနှငျ့ ကုနျတှငျးပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး၊ ကုနျသှယျရေးလုပျငနျးမြား ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
ပွငျသဈသံအမတျကွီး H.E. Mr. Christian Lechervy က '' ပွငျသဈလုပျငနျးရှငျမြားသညျ အနာဂတျတှငျ နှဈနိုငျငံစီးပှားရေးမွှငျ့တငျရနျအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ မွနျမာမှစီးပှားရေးမိတျဖကျမြားကို ရှာဖှရေနျ လာရောကျခွငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ စီးပှားရေးအခှငျ့အလမျးသဈမြားနှငျ့ စိနျချေါမှုအသဈမြားအတှကျ အတူတကှပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး '' ပွောကွားသညျ။
ယခုလာရောကျသော ပွငျသဈလုပျငနျးရှငျမြားသညျ သီလဝါအထူးစီးပှားရေးဇုနျသို့လညျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားအတှကျ သှားရောကျလလေ့ာရနျရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။
'' ယခုအခြိနျတှငျ မွနျမာနိုငျငံသညျ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေနျအတှကျ ကုနျသှယျမှုနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားကို မွှငျ့တငျနိုငျမညျ့ ကွီးမားသော အခှငျ့အလမျးသဈမြားရှိသညျ့ အခြိနျအခါဖွဈကွောငျး '' ကုနျသညျစကျမှုအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောမငျးဝငျးက ပွောသညျ။
ဆကျလကျ၍ '' ပွငျသဈနိုငျငံသညျ စကျမှုကဏ်ဍ၊ သိပ်ပံနှငျ့နညျးပညာကဏ်ဍနှငျ့ စီးပှားရေးကဏ်ဍတို့တှငျ အလှနျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလကျြရှိသဖွငျ့ ပွငျသဈလုပျငနျးရှငျမြားအား မွနျမာနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပိုမိုကွီးမားသော အခနျးကဏ်ဍမှပါဝငျ၍ နှဈနိုငျငံ အပွနျအလှနျအကြိုးခံစားခှငျ့မြားဖွငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျစလေိုကွောငျး '' စီးပှားရေးတှဆေုံ့ပှဲတှငျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
ပွငျသဈနိုငျငံအခွစေိုကျ French – Myanmar Business Council နှငျ့ ASEAN Committee of MEDEF International ၏ ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Francois CORBIN နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈသံအမတျကွီး H.E. Mr. Christian Lechervy တို့ ဦးဆောငျမှုဖွငျ့ ပွငျသဈ-မွနျမာ လုပျငနျးရှငျအခငျြးခငျြး စီးပှားရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုလုပျငနျးမြား အကြိုးတူပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ စီးပှားရေးတှဆေုံ့ပှဲကို ဖဖေျောဝါရီလ ၃ ရကျ ညနပေိုငျးတှငျ ကုနျသညျစကျမှုအသငျးခြုပျ (UMFCCI) ၌ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
စီးပှားရေးတှဆေုံ့ပှဲတှငျ အသငျးခြုပျ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမောငျမောငျလေးမှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ကုနျသှယျမှုနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုအခွအေနမြေားနှငျ့ လကျရှိစီးပှားရေးအခွအေနမြေားကို ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့ပွီး နှဈနိုငျငံလုပျငနျးရှငျအခငျြးခငျြး စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းပေါင်း ၅၄၁ ခုကို ရှာရန်နှိပ်ပါ
နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန် ပြင်သစ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
ပြင်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၂၀ ဦးပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ ရေနှင့် အမှိုက်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရထားလမ်း ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်နှင့် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ရေကြောင်းနှင့် ကုန်တွင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy က '' ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များသည် အနာဂတ်တွင် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မြန်မာမှစီးပွားရေးမိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသစ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း '' ပြောကြားသည်။
ယခုလာရောက်သော ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များသည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သို့လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် သွားရောက်လေ့လာရန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
'' ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်နိုင်မည့် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းသစ်များရှိသည့် အချိန်အခါဖြစ်ကြောင်း '' ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ '' ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် စက်မှုကဏ္ဍ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့တွင် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိသဖြင့် ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုမိုကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်၍ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း '' စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် French – Myanmar Business Council နှင့် ASEAN Committee of MEDEF International ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Francois CORBIN နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy တို့ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြင်သစ်-မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲတွင် အသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေများနှင့် လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။